काठमाडौँ । यौन हिंसाको घटना विश्वभरका लागि एउटा समस्या बन्दै गइरहेको छ । सार्वजनिक ठाउँमा होस् परिवार भित्र यौन हिंसाको शिकारमा महिला पर्दै आएका छन् । हालै बेलायतमा अर्को घटना घटेको छ । २८ वर्षिय रचेल नाम गरेकी महिलाले आफू आफ्नै सौताने पिताबाट पटक पटक बलात्कार गरेको बताएकी छिन् ।
उनले आफ्नो पहिचान सार्वजनिक गर्दै तिन पटकसम्म एबोर्शन गरेको पनि बताएकी छिन् । उनी जब ७ वर्षको थिइन् त्यसबेला देखि नै उनका सौतिना पिता एनोकी एन्ड्रूले आफूलाई यौन हिंसा गर्ने गरेको बताएकी छन् । ४४ वर्षीय एन्ड्रुलाई हालै अदालतले २० वर्षको जेल सजाय तोकेको छ ।
डेली मेलका अनुसार रचेलमाथि भएको यौन हिंसामा उनकी आमा पनि संग्लन थिइन् । आमालाई समेत अदालतले महिला हिंसामा सघाउ पुर्‍याएको आरोपमा ५ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । अदालतले जेल सुनाएपछि रचेलले एक अन्तर्वार्ता भनेकी छिन्, दुबै जना जेलभित्र छन् ।
मैले अब सुरक्षीत महसूस गरिरहेको छु । रचेल ४ वर्षको छदाँ उनका पिता आमासँग अलग भएका थिए । सन् २००० मा आमाले एन्ड्रूसँग डेट शुरू गरेकी थिइन् । सुरूवाती दिनमा सौतिने पिताले आफूलाई माया गरेको र आमासँग विवाह हुनुभन्दा एक हप्ता अघि देखि आफूलाई बलात्कार गर्न सुरू गरेको उनले बताएकी छन् । एजेन्सी
मोदी मन्त्रिमण्डलबाट शिवसेनाका मन्त्री अरविन्दले दिए राजीनामा
नयाँ दिल्ली । भारतका केन्द्रीय मन्त्री अरविन्द सावन्तले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको मन्...
सरकार विरोधी प्रदर्शनमा सय भन्दा बढीको मृत्यु
काठमाडौं । इराकमा जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनमा मारिनेको संख्या सय भन्दा बढी पुगेको छ । सुरक्षाकर्...
रामको जन्मभूमि अयोध्याको विवादित जग्गा हिन्दुको
काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालते रामको जन्मभूमि अयोध्याको विवादित जग्गासम्बन्धी मुद्दामा हिन्दुह...
लागुऔषधका तस्करले गरे ९ जनाको हत्या
काठमाडौं । उत्तरी मेक्सिकोमा ९ जना अमेरिकी नागरिकको गोली हानी हत्या भएको छ । ६ बालिबालिका र तीन म...
‘डेटिङ’ जादा जागिर च्वाट
न्युयोर्क । अमेरिकी प्रसिद्ध रेस्टुरेन्ट कम्पनी म्याक्डोनाल्ड्सले उसको प्रमुख कार्यकारी स्टिभ इस्...
आयो भारतको नयाँ नक्सा, पाकिस्तान असन्तुष्ट
नयाँ दिल्ली । जम्मू–कश्मीर र लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश बनेपछि भारत सरकारले पहिलो पटक मुलुकको नय...
पुरुषको लिंग किन सधैं उत्तेजित हुँदैन ? यस्तो छ कारण
काठमाडौं । शारीरिक सम्बन्ध कायम गर्ने रहर जुनसुकै उमेरका मानिसमा हुन्छ । उमेर जतिसुकै पाको भए पनि...
लोकसेवा आयोगद्धारा स्थानीय तह पाचौँ तहको लिखित नतिजा प्रकाशन
बेड नम्बर २०७ मा १२ वर्षीय गर्भवती बालिका !
किन घट्न थाल्यो लोक सेवा आयोगमा दरखास्तको दर ?